I-Country Cottage eFlory Farm
Igumbi lokulala eli-3 elinegumbi lokuhlambela eli-2 kwiFlory Farm eKentwood, eLouisiana. Relax kwesi semo sinoxolo kwaye wonwabe yonke into enayo. Lo mhlaba uvaliwe kwaye uya kufumana ikhowudi yokungena. Kancinci ngaphezu kweyure ukusuka eBaton Rouge naseNew Orleans kunye nemizuzu engama-20 ukusuka ePercy Quinn State Park eMississippi.
Kukho amachibi agciniweyo ama-3 kwipropati yokubambisa kunye nokukhulula ukuloba. Kuya kufuneka uze nezixhobo zakho zokuloba.
Kunye nemibono entle yepropathi eli khaya libonelela ngedama lokuqubha elihle, iwasha kunye nesomisi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye nomenzi wekofu. Coca iitawuli kunye neelinen kuwo onke amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela. Kukwakho nejingi ebekwe phandle ukuze abantwana bazonwabele.
Indlu yethu ilala abantu abayi-4/5. Ndine-$25.00 yomrhumo weendwendwe ezongezelelweyo. Ukuba uceba ukuba neendwendwe ezininzi, ngenxa yentlonipho, siyakucela ukuba uthethe nathi kuqala kwaye uqiniseke ukuba silungile ngayo. Ukuba akunjalo ke kuya kufuneka uhlawule umrhumo we-25.00 ngondwendwe olongezelelweyo emva ko-4.
Ineendawo zokutyela ezininzi zalapha.
Abanini bayafumaneka njengoko kufuneka